baaq taageero buuxda oo ku Socota suldaanka guud ee Beelaha irir samaalee suldaan cabdikariim farah ibraahiim by cawaale hassan (Hadhwanaagnews) Wednesday, July 04, 2012 Waxaan salaamayaa dad weyah somaliyeed meel walba joogaan . Salaan ka dib waxaan
suldaan cabdikariim farah ibraahiimWaxaan salaamayaa dad weyah somaliyeed meel walba joogaan . Salaan ka dib waxaan halkan baaq taageero u dirayaa suldaanka guud ee iri samaale suldaan cabdikariim farah ibraahiim .
suldaanka ilaahay waxaan uga rajeenayaa inu noqdo suldaan lagu nasto oo dadka walaalah ee beeshaan ka so jeeda wax qabad la taaban karo u sameeya hadii noqoto dhinaca caafimaadka hor marintaa deeganada ay beesho degto , iyo wax barashada .
suldaan cabdikariim farah ibraahim suldaanka guud irir samaale mar kale waxaan ku leeyahay hambalyo ... hambalyo
cawaale hassan cawaale_83@hotmail.com